Myanmar Gays Heaven: Photo of saw kyawoo and Pai Pai
Posted by Myanmar Gays Heaven at 4:05 AM
Labels: by mail, Real Gay Love Photos, Same Sex
mryan yan December 7, 2013 at 5:00 PM
gipsy bird July 4, 2015 at 8:56 PM
phyo thuaung December 13, 2013 at 6:51 PM
Mr yan yan. ကိုအကြံတစ်ခုပေးမယ်နော် အကိုချစ်သူတစ်ယောက်သာအတည်တကျရှာရင်ပိုကောင်းတယ် လိင်ဆက်ဆံဖို့ ပဲအဓိကထားရင်မကောင်းဘူး
ကျတော်လည်း ကျတော်တို့ ချစ်သူစုံတွဲံ ပုံလေးတွေတင်ချင်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ ဘယ်လိုတင်ရမယ်မှန်းမသိလို့ မတင်တာပါ နည်းလမ်းလေးပြောပြပါဦးဗျ လိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ ဘော်ဒါတွေကိုလည်း အတူတူမျှဝေခံစားစေချင်လို့ပါ plz.....
Myanmar Gays Heaven December 19, 2013 at 7:19 AM
လွယ်ပါတယ် အကိုရ...အကိုတို့ရိုက်ထားတဲ့ စုံတွဲပိုတွေကို myanmargaysheaven@gmail.com ကိုပို့လိုက်ရုံပဲဗျ
ချစ်​သူ ဘယ်​သူကနာလည်းလက်​ခံ​ပေးလိုလဲ အကြင်​နာ​နွေ​ထွေးမှူနဲငြိ်မ်းချမ်းတဲဘ၀ကိုလိုချင်​တာ​ပေါ့ တကယ်​​တော့ အချစ်​က​စိတ်​ကူးရွတ်​​ကြွေပါ​လေ
wai yan December 16, 2013 at 10:14 AM
အသက်လည်းကြီးလာပီ ရည်းစားထားချင်ပီ အရပ်အရမ်းမပု ကိုယ်လုံးပြည်ြ့ပည့် အသက် ၂၅အထက် perfect manly style. နာလည်မှုနဲ့အလိုက်သိတတ်မှုရှိစေချင်သည်ရုပ်ကကြည့်ကောင်းရုံဆိုတော်ပါပီ ချောဖ်ုမလိုပါ neoenthuzoe@gmail
MTG December 6, 2014 at 9:43 AM
bot ပါ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်နားလည်မှု ကူညီဖေးမမှု စာနာသနားမှု ရှိမည့် ရွယ်တူ top တစ်ယောက်နဲ့အတည်တွဲချင်ပါသည် စီးပွားရေးကိုနှစ်ယောက်ချစ်ခင်တိုင်ပင်စွာလုပ်လိုပါသည် ကျနော်အသက်က ၂၅ နှစ်ပါ
azonomous March 20, 2015 at 9:43 AM
I am interested in you.My number is 09421133941.like to meet you.
min khant moe October 1, 2015 at 7:55 AM
min khant moe October 1, 2015 at 7:56 AM
Chit Chat December 18, 2015 at 4:54 PM
Chit Chat December 18, 2015 at 4:55 PM